Maxaa Muhiim U Ah Noloshaada? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — October 7, 2015
Aqoonta waa awooda koowaad oo ku fahansiiso muhiimada aad u nooshahay iyo waxa adiga muhiim kuu ah. Hadaba ogaaw waxaad barato waa wax adiga muhiim kuu ah kuna anfici doona. Ku bixi waqtigaaga dadka wanaagsan oo ku dayashada mudan, si aad u hesho caqli nadiif ah oo aad kaga guuleysato nolosha caajiska badan. Nolosha caajiska badan waa horseedaha bur-buriyaha qalbiga haddii taasi dhacdana waxaa gebi ahaanba bur-buray noloshaada oo idil.
Dadka kulla dhaqan naxariis iyo xushmad. Naxariista iyo xushmada waxay kaalin weyn kaga jirtaa nolosha wanaagsan waxay sahashaa inaad bulshada sumcad ka kasbato siddoo kalle waxay sahashaa in bulshada guud ahaanteeda ay xiiso weyn kuu qabaan la kulan kaada.
Muuji hadafka noloshaada:
Suura gal ma tahay inaad u safarto magaalo aadan garaneyn magaceeda , dhanka ay kaa jirto iyo waliba masaafada ay kuu jirto, adigoo ruux kalle aan isku haleyneyn? Dabcan jawaabta waa iska cadahay suura galna ma noqon karto inaad aado meel aad rabto adigoo anan ka helin xog ku saabsan sidda magaceeda oo kale, safar kooban oo saacado ama daqiiqado uun qaadanayo haddii uusan suura gal ahayn qorsho la’aan maxaa u maleyneysaa safarka nolasha oo idil.
Nolasha waa safar u baahan qorsheyn iyo in loo sameeyo yool ay hiigsato oo ay ku dadaasho xaqiijintiisa iyadoo raaceyso qorshe ay u degsatay, dadka nolasha ku guuleysta waa dadka leh yool ay hiigsadaan isla markaana u dajiya qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen hiigsigooda. Yoolka ugu weyn ee uu hiigsanayo qofka muslimka ah waa jano iyo in uu Nabi Maxammed (NNKH) uu daris kulla noqdo janada, haddaba qof walbo si uu u gaaro yoolkaas waxaa lama huraan ah in uu u maro wadadii uu u jeexay nabi Maxammed (NNKH) walaalkeyga qaaliga ahaw yeysan jirin wax kaa mashquuliya fulinta waajibaadka diiniga ah.
Waxaa jiro sidoo kalle qof walbo in uu xambaarsanyahay hadaf iyo yool kalle oo uu hiigsanaayo isla markaana ka damacsanyahay nolashiisa inta uu aduunkan dul joogo , balse dadka badigood hamigooda waxa ay ku keedsadaan uurkooda iyagoo anan sameyneyn wax isku day ah markii uu ruuxa sidaa noqdana hamigiisii oo idil wuxuu isu bedalaa hawo iyo khiyaali aan soo dhaafin uurkiisa.
Maxaa ka damacsantahay nolashaada midda dhaw iyo tan fog?
Waa qasab qofka bini aadamka ah mar walbo wax buu hiigsanayaa isla markaana jecelyahay in uu gaaro balse waxaa kalla duwan sidda ay u qaabilaan ka gun gaarida waxyaabaha ay hiigsanayaan. Dadka badankood malahan qorshe ay u dajiyeen ka mira dhalinta yoolka nolashooda waxay ay nolasha u qaabilaan habkii ay iyada usoo qaabisho, halkii ay nafta xukumi lahaayeena ayaga ayey hogaanka u heysaa taana waxaa ay sababta in inta badan in ay qiimo beesho nolasha qofka.
Maxaa u diida dadka qorsha u dajinta hadafka noloshooda?
Waxyaalaha ka hortaagan dadka badankood in ay qorsheyaan noloshooda waa ay faro badan yihiin hase yeeshee waxaan ka xusi karaa qodobadaan.
cabsi ay ka qabaan guul daro iyo fashil ku yimaada qorshaha ay degsadaan
liiditaan nafsadooda ay liidayaan iyagoo isu arko in aysan qorshe fulin Karin
faham daro muhiimada ay leedahay qorshe u dajinta hadafka nolosho
xishood iyo cabsi ay ka qabaan in ay bulshada la yaabto
Waa muhiim in uu kuu cadyahay hadafka aad nolasha ka leedahay is weydii maxaad u nooshahay? Waa maxay hadafka fog ee aad noloshaada ka damac santahay? Mar haddii aad jawaab u hesho su’aalahaas waxaa kuu sahlanaan dooti qorsho u dajinta xaqiijinta hadafka noloshaada. Ugu danbeyntii waxaan kugula dardaarmayaa nafsadaada inaad hagto oo aad qorshe u dajiso waayo haddii aadan hagin iyadaa hogaanka kuu qaban doont. Nafsada haddii ay hogaanka kuu qabato oo ay hawadeeda iska raacdana waxaad halis u tahay halaag iyo khasaaro Alle ha inaga najeeyee. dareenka nolasha si aadan uga dhicin hag nafsadaada oo u yeel hadaf iyo yool ay hiigsato.
Next post Xuutiyiinta Yaman oo dagaalka joojinaya
Previous post Maxay Kulla Tahay Haddii Qabyaaladdu Gashay Xittaa Ardayda?